5 Most Charming Yakavanzwa Anokosha In Belgium | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Most Charming Yakavanzwa Anokosha In Belgium
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 25/01/2021)
Save A Train ari kukupinza 5 Most Charming Yakavanzwa Anokosha In Belgium kuti kushanya! Pane zvakawanda Belgium pane chete doro. Wanikidza quirky nematende, muchivande zvivezwa, uye maguta akanga asati ari radar yako asi zvachose unofanira kuva! Belgium ane haazivani yakavanzwa anokosha iwe achakurumidza achawira rudo.
Mechelen ari pakati pakati kweBrussels uye Antwerp. Nepakati guta kunoratidzwa gabled Renaissance dzimba, vachinyatsoongorora ichadzorerwa, apo pamusika iri dzaitongwa Gothic Cathedral kudivi uye guta horo, uyewo Gothic, panorumwe. Mechelen chinowanzofuratirwa vachida akakurumbira zvikuru dzakasiyana. zvisinei, muvare pasi pose uye achakupa kuona yakaisvonaka Belgium kugarwa kuti kunopfuura unokosha nguva yako apo munyika uye zvechokwadi mumwe Chakavigwa Anokosha In Belgium kuti kushanya!
KweBrussels kuna Mechlen Zvitima
Antwerp kuna Mechlen Zvitima
Rinonzi Ghent kuna Mechlen Zvitima
Liege kuna Mechlen Zvitima
Idiki kuti aigona (With shuga!) Kana wakambokurukura vainakidzwa shuga kuutio pamwe yenyu yakachena kofi kana tii, zvino hapana mubvunzo zvichava pamwe kunge kupatsanurwa mune duku taundi Tienen. guta rino zviduku hakusi kure Leuven. Kunzira yakarohwa uye mukati memoyo chaiye Flemish Brabant muFlanders, nzvimbo iyi yaiva kamwe pa moyo Ceramics eRoma uye magirazi nokuitwa! Ichi chimwe chikonzero chikuru chiri chimwe Anokosha Yakavanzwa In Belgium kunoshanyira!
Kune zvakawanda kune Tienen kupfuura zvinosangana neziso. mhiri pachena machechi huru Tarirai. Soka akakwidza ambiance uye mharidzo dzeko chili (chinyakare Flemish chili kunosanganisira zvakawanda nyama-inorema zvinodyiwa akadai stews, meatballs, uye mussels).
Chimwe chinooneka chinofanira-kuona chimiro cheguta ndiSint Germanuskerk, inoshamisa Romanesque chechi zvikamu pedyo UNESCO belfry uye kufambidzana kuna remakore rechi13. Muna July uye August, carillon Concerts kutora nzvimbo dzose Wednesday. Wedzera kuti pakarenda yako!
Liege kuna Tienen Zvitima
KweBrussels kuna Tienen Zvitima
Antwerp kuna Tienen Zvitima
Zvitima vanotofanira Namur
Unogona nyore kubata chitima tichibatsirwa Save A Train kuna kweBrussels. Zvino ndiwo anokurumidza miniti matatu atasve kumaodzanyemba kuguta Hoeilaart. Pano uchawana suo kuna Sonian Forest uye mumwe 5 Most Charming Yakavanzwa Anokosha In Belgium kuvhakachira!
Kana rudo kuongorora mamiriro, ndiyo hwaro wakakwana, kunze vakabatikana kweBrussels. Shanyira Forest Museum Jan Van Ruusbroec, kudzidza pamusoro sango asati kuongorora mumwe vazhinji vachifamba vakaita mudungwe munzira.
Hoeilaart ane mumwe anokosha aungawana; ndiwo musha mazambiringa zvakanakisisa Belgium. Hoeilaart akanga kamwe aizivikanwa magirazi guta nekuti vose ramazambiringa akazadzwa greenhouses. Nepo kurimwa sezvataiita mumakore, Hoeilaart mazambiringa zvichiri inoremekedzwa vakapoteredza nyika, uye vanotengesa panze nekukurumidza kudaro, zvakanakisisa vanoenda kunobva kuti maoko ako pamusoro pavo.
Lille kuna Hoeilaart Zvitima
Brusseles kuna Hoeilaart Zvitima
Antwerp kuna Hoeilaart Zvitima
Liege kuna Hoeilaart Zvitima
4. Charming Yakavanzwa Gem – Tongeren, Limburg
vanoshanyira mukuru kuguta Belgium. A remadunhu- chakapiwa nokuda kwayo akapfuma munhoroondo Gallo Roman. Zviratidzo Nhoroondo iyi ndivo kuoneka muguta rose, asi chakanakira pekutanga ndiko kuhwina mubairo-Gallo Roman Museum. Kamwe uchinge vakanyura pachako vatambi Exhibits, rova migwagwa pane imwe yekutungamira kufamba nzendo kuti uwane zvidimbu zvezvakaitika muTongeren.
guta rino duku rine Zvivako maviri UNESCO dzakanyorwa, ari belfry of Basilica Yedu Lady uye beguinage. Dzidza pamusoro upenyu Beguines, vakadzi vazvitsaurira kuchechi, panguva Beguinage Museum Beghina. musi weSvondo, Tongeren wehondo Beneluxs zvikuru antiikki musika, vanopfuura 350 vatengesi vanotengesa zvinhu zvekare kubva kunguva dzese dzenhoroondo.
Kana zvakadaro hamuna mukaguta kare 5 Most Charming Yakavanzwa Anokosha In Belgium, kumbomira pedyo Alden Beisen Castle remba kuburikidza picturesque pamutemo mubindu.
Maastricht kuna Tongeren Zvitima
Liege kuna Tongeren Zvitima
Aachen kuna Tongeren Zvitima
Bonn kuna Tongeren Zvitima
5. Charming Yakavanzwa Gem – Binche, Hainaut
Guta Binche muBelgian munharaunda Hainaut sokunge nezvimwe mumataundi maduku Wallonia. Zviri hope nzvimbo koko chikuru chete mushanyi kukwezvwa, vakaisvonaka International Museum of Carnival nezvifukidziro, kana Amai.
Mumazuva akazoteverwa Ash Wednesday, Binche chinhu asi hope. The Carnival pamusoro Binche rakasiyana nemamwe munyika uye zvechokwadi anokosha aungawana! The Mhemberero kunosanganisira zvemaoresa zvokupfeka, mumhanzi, kutamba, uye akanaka vakasvimha kunwa uye mafaro! Zviri unokosha chokwadi, zviri akanyorwa somunhu Nounyanzvi pamusoro Oral uye chisingaoneki Works of Humanity ne UNESCO.
Tsika uye mhemberero vanogona sokuti asingatsananguriki zvachose nevokunze, luckily Amai aripo kutsanangura zvose hwakajeka akadzama. Kupinda Carnival pamusoro Binche munhu zvechokwadi chisingakanganwiki ruzivo.
KweBrussels kuna Binche Zvitima
Antwerp kuna Binche Zvitima
Lille kuna Binche Zvitima
Reims kuna Binche Zvitima
Akagadzirira nekuwana 5 Most Charming Yakavanzwa Anokosha In Belgium? Zvadaro musoro pamusoro kuti Save A Train ikozvino. Book mumaminitsi pasina zvakavanzika mari, chete yakavanzwa anokosha!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Most Charming Yakavanzwa Anokosha In Belgium” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-belgium%2F – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)